Sajilo Patro Blogs: मासु बेच्दै, सेयरमा लगानी गर्दै !
उनको परिचय दिनमै २ पटक फेरिन्छ । कुनै बेला मासु व्यवसायी, कुनै बेला सेयर लगानीकर्ता। सफल मासु व्यापारी मात्र नभई पछिल्लो समय सेयरबाट लखपति हुने लगानीकर्ताको रुपमा चिनिन्छन् रोजिना उप्रेती ।
गाउँमा कृषि गर्दागर्दै पतिले चलाउने काठमाण्डौको मासु पसल आफैंले सम्हालेकी उनी सेयरबजारकी एक कुशल लगानीकर्ता हुन् ।
नेप्से बढ्दा र घट्दा दुवै अवस्थामा सम्हालिदै सेयर खरिदबिक्रीमा सक्रिय उनको हसिलो मुहारले आत्मविश्वास झल्काउँछ ।
२०४८ साल बैशाख २० गते धादिङको रोडाङ्ग गाउँपालिका २ नम्बर वार्डमा बस्नेत परिवारमा जन्मेर धादिङकै गजुरीका बिक्रम उप्रेतीसँग १६ वर्षको उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी थिईन । ८ कक्षा मात्रै अध्ययन गरेकी उनले उद्यमी बनेर स्वदेशमा नै लाखौं कमाउने सफलता पाएकी छिन् । उनको सफलताबाट पैसा कमाउन विश्वविद्यालयको डिग्री नै चाहिन्छ भन्ने मान्यता समेत गलत साबित भएको छ ।
हाल उनी काठमाण्डौ बागबजारस्थित इच्छुमती गल्लीमा डेरामा आफ्ना २ छोराछोरी र पतिका साथ बस्दै आएकी छिन्।
२०६८ सालतिर अहिलेको इच्छुमती गल्लीमा पतिले चलाउँदै आएको पसलमा त्यत्ति नाफा नभएपछि पतिले नै उक्त पसल जिम्मा दिएको उनी बताउँछिन् । गाउँमा खेतीकिसान गर्दागर्दै काठमाण्डौ आएकी उनले पतिको श्री बिक्रम मिट सप चलाएपछि आजसम्म पछाडि फर्कन नपरेको सुनाइन् ।
उनी मासुपसलमा बिहान बेलुकी नै खटिएकी हुन्छिन् । 'हामी बराबरी काम गर्छौ, तर अलिक व्यस्त चाहि म नै हुन्छु ।'- उनी भन्छिन् ।
उनका पतिले पनि मासुको होम डेलिभरीमा उनलाई सघाउँछन् । यति मात्रै हैन कि उनका पतिले भान्सामा गएर खाना बनाउन पनि सहयोग गरेकोले यो जोडी उदाहरणीय पनि देखिन्छ ।
दैनिक कुखुराको १ सय केजी र २ वटासम्म खसीको मासु बेच्ने रोजिना चाडपर्वमा बिक्री डब्बल हुने गरेको बताउँछिन् । काम सानो ठूलो हुँदैन जुनसुकै काम व्यवसाय गर्दा राम्रो र सही ढंगले गर्दा अप्ठ्यारो नभएको उनको बुझाई छ ।
यसरी प्रवेश गरिन् सेयर बजार
नजिकै रहेको मोबाईल पसलका श्याम दाइ र आफन्त देवर सन्तोष पाठकको सल्लाह र रोजिना आफैं पनि जान इच्छुक भएर ७४ साल बैशाख पहिलो हप्ता सेयर बजारमा पाईला टेकिन् ।
हावातालमा गएको र रातो, सेतो, हरियो रङ्ग बारे ब्रोकर अफिसमा नै गएर सिकेको उनले सुनाइन् । सुरुवातमा अन्धाधुन्ध लगानी गरी उनले पछि कुरा बुझ्दै, कम्पनीको अवस्था हेर्दै लगानी गर्न थालिन् ।
सुरुमा खानीखोलाको आईपीओबाट प्राथमिक बजारमा प्रवेश गरेकी उप्रेतीले डीडीबीएल १४९० रुपैयाँको दरले १५० कित्ता किनेको सुनाईन । ब्रोकर अफिसमा दिउँसो जाँदा जाँदै साथीहरू बनाएकी उनले पुराना लगानीकर्तालाई सोधपुछ गर्दै लगानीको निर्णय लिन्थिन सुरुवाती दिनहरुमा ।
उप्रेतीले सेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानीमा धेरै पैसा हालेकी छैनन् । उनले अल्पकालीन रुपमा कहिलेकाही सावाँमै त कहिले ५० र १०० सय नाफा आउँदा बेचेर प्रोफिट बूक गर्ने गर्छिन् ।
उनले छोटो समयमै ६० लाख बढीको पोर्टफोलियो बनाएकी छिन् । जसमध्ये अधिकांश बीमा र लघुवित्तको छ । करिब ९ वटा कम्पनीको सेयरमा उनले लगानी गरेकी छिन् । उनले एकैपटक ठूलो परिमाणमा सेयर खरीद गर्छिन् । भन्छिन्, एक दुई पैसा हेरिन्नन, ५ सयभन्दा कम संख्यामा सेयर खरिद पनि गर्दिँन।
सेयरबजार त जोखिमपूर्ण छ नि भनी प्रश्न राख्दा उप्रेतीले भनिन्-'खतरा मोलेर नै सेयर बजारमा लगानी गर्ने हो, आए आउँछ, नआए पनि गुमाउने साहस हुनुपर्छ ।'
घाटालाई पूर्ति गर्न छिटोछिटो किनबेच गर्ने गरेको उनले बजार घटेर पोर्टफोलियाको मूल्य तल झरे पनि भोलिका दिनमा अहिलेको सेयर नै उकास्ने आत्मविश्वास व्यक्त गरिन् ।
बिहान बेलुका मासु पसलमा व्यस्त उनी दिउँसो फूर्सदमा आर्थिक टीभी हेर्ने गरेको र बजारमा जाँदा साथीहरूले बोलेको सुन्ने र आफैं पनि अध्ययन गरेर लगानी गर्ने गरेको बताईन। घट्दो बजारमा बूकक्लोजपछि मात्रै किन्नुपर्ने बुझेकी उनी बोनस र हकप्रदमा नलोभिएको बताईन ।
मासुको व्यापारबाट तुरुन्तै फाइदा हुने, तर सेयर बजार भने जूवाघर जस्तै कुरिरहनुपर्ने भएकोले सेयर बजार मात्र जीवन बाँच्ने आधार नबनाई अन्य काम पनि गर्नुपर्ने उनको अनुभव छ ।
कम्पनीका बारे बृहत अध्ययन गरेर, बुझेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सल्टाउन सके व स्टप लस गर्दै सेयर खरिदबिक्री अल्पकालीन गर्दा पनि महिनाको औसत ३०-३५ हजार आम्दानी गर्ने गरेको खुलासा उप्रेतीले गरिन्।
'बैशाख पहिलो हप्ता त हप्तादिन भित्रै ३-४ लाख कमाएँ ।'-उनले भनिन् । सेयर बजारमा पति र सन्तानबाट समेत सहयोग भएको उनले सुनाउन भ्याइन् ।
उनका पति बिमल उप्रेती पनि पत्नी रोजिनालाई अधिक विश्वास गर्ने गरेको र घरधन्दा र व्यवसायमा बराबरी सक्रिय भएर काम गरेको र खुशीसाथ जीवन चलेको बताउँछन् । आफू सेयर बजार बारे अनभिज्ञ रहे पनि सहयोग र साथ दिने गरेको बिजशालालाई बिमल बताउँछन् । 'मलाई थाहा छैन, कमाई हुन्छ भने जाउ तिम्रो विश्वास छ भनेर हात अगाडि बढाइदिएको छु, २-४ पैसा परिवारलाई पनि राम्रै हुन्छ भने सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर साथ दिएको हुँ ।'-बिमलले भने।
अहिले घाटा छ नि डर लाग्दैन ? भन्दा बिमल थप्छन्-'किनेको सेयर हतारिए किन बेच्नु ? घाटा खाएर कसैले नबेचौं, नाफा हुने दिन धेरै टाढा छैन जस्तो लाग्छ ।'
ब्रोकरबाट पनि पर्याप्त सहयोग पाएको र बढीजसो फोनबाट सम्पर्क गरेर खरिदबिक्री आदेश दिने गरेको रोजिनाले बताइन् । दिउँसो बजार खुलेको बेला खाना खाँदै, स्कुलमा बच्चालाई पुर्याउन जाँदा पनि रोजिनाको आँखा नेप्सेको वेबसाइटमै हुन्छ । उनले एक रहस्य खोल्दै भनिन्-' राशिफल हेरेर पनि खरिदबिक्री गर्ने गरेकी छु। अनि त्यसरी किनबेच गर्दा मिल्छ, फाईदा हुन्छ भन्दा अहिलेसम्म मिलेको पनि छ, यसलाई संयोग नै मान्नुपर्ला ।'
१५ महिनामै आमा गुमाएकी उनले जीवनमा धेरै दुःख पाएकी छिन् । त्यही भएर कहिलेकाही बजारमा गुमाउँदाको पीडालाई पचाउन खासै गाह्रो नहुने गरेको उनी बताउँछिन्
नयाँ लगानीकर्तालाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ? भनी बिजशालाको प्रश्नमा कम्पनी हेरेर, थोरै लगानीमा सस्ता र राम्रा कम्पनी छानेर लगानी गर्नुपर्ने सुझाउँछिन। उनका अनुसार मार्केट हेरेर अघि बढ्नु, समयलाई पर्खनुपर्ने, हतार नगरी लगानी गर्नु नै बुद्धिमानी हो ।
व्यवसायमा सफलता प्राप्त गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ नि भन्ने बिजशालाले प्रश्न तेर्स्याउँदा सहनशीलता, मीठो बोलीवचन, ताजा सफा र ग्राहकलाई आकर्षक थप सेवासुबिधा दिए सफलता आफ्नै हातमा रहेको रोजिनाले सुनाइन् ।